भोलि माघ १८ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल – Online Nepalaja
भोलि माघ १८ गते आइतबार, यस्तो छ तपाईको राशिफल
January 30, 2021 100
लामो यात्राको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ । जागिरमा पनि सावधान रहनु होला । विछोडिएका परिवारजनसँग भेटघाट हुनेछ । विगतका कमी कमजोरीलाई पनि सुधार गर्ने मौका छ । साथी भाइसँग सन्तुलित व्यवहार गर्नुहोला । प्रतीक्षित नतिजाले साँझदेखि उत्साह बढाउनेछ ।
अधिकार र प्रतिष्ठा जोगाउन सफल भइनेछ । प्रयत्न गर्दा लक्ष्यमा पुग्न सकिनेछ । केही खर्च लागे पनि सोचेको काम बन्नेछ । व्यवसायमा थप लगानी बढाउन सकिनेछ । प्रतिस्पर्धीहरूले हार खानेछन् । रोकिएका काम बन्ने र नयाँ काम प्रारम्भ गर्ने समय छ ।
मेहनतले प्रतिस्पर्धाको दौड जिताउन सक्छ । भौतिक साधन जुट्नेछन् र दिगो फाइदा हुने काम सुरु हुन सक्छ । अवसर आए पनि मौकामा लाभ उठाउन नसकिएला । ठूलै प्रयत्न गर्दा सामान्य फाइदा हुनेछ । बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिनेछ ।
अरूका लागि बुद्धि र श्रम खर्चनु पर्ने देखिन्छ । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । सर सापटमा धन खर्च हुने समय छ । आम्दानी बिगार्नेहरू सक्रिय रहन सक्छन् । स्वास्थ्यको कमजोरीले पढाइमा बाधा पुग्न सक्छ । अप्रिय समाचारले मन खिन्न तुल्याउन सक्छ ।
समयलाई पछ्याउन नसक्दा दुःख पाइनेछ । भौतिक साधन बिग्रनाले पनि लक्ष्य प्राप्त गर्न नसकिएला । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुनेछ । जटिल काम सम्पादन हुनाले पराक्रम र उत्साह बढ्नेछ । व्यापारमा विशेष फाइदा उठाउन सकिनेछ ।
परिस्थिति अलि प्रतिकूल रहनेछ भने सोचेको लाभ नउठ्न सक्छ । सहयोगीहरूले काममा साथ दिनेछन् । विगतको श्रमबाट प्रशस्त धन लाभ हुनेछ । बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ । बिछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ ।
फुर्सद मिल्नुका साथै यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ । परिस्थितिसँग केही सम्झौता गर्नु पर्ने देखिन्छ । वैदेशिक कामकाजमा फाइदा होला । मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुने योग छ । टाढाको यात्रा गर्ने मौका छ । विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछन् ।
सवारीमा सावधानी अपनाउनु होला । लेनदेनको विवादले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । टाढिएका साथीभाइ नजिकिनाले हर्ष बढ्नेछ । धेरैले तपाईंका कामको तारिफ गर्नेछन् । सोखले खर्च बढाउने तथा वैधानिक प्रावधानले अधिकार खुम्च्याउने सम्भावना छ ।
पढाइ लेखाइमा समय दिन नसकिएला सहयोगीहरूको भरपर्दा काममा बाधा पुग्न सक्छ, सजग रहनुहोला । आश्वासन बाँड्नेहरूले झुक्याउन सक्छन् । अरूको विश्वासमा पर्दा अन्त्यमा धोका पाइएला । प्रतिस्पर्धीलाई उछिन्दै आम्दानी बढाउने अवसर प्राप्त हुनेछ ।
प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै रमाइलो भेटघाट हुनेछ । विभिन्न सहयोग र उपहार प्राप्त हुनेछन् । पठन–पाठनमा प्रगति हुनेछ । विशेष सभा–समारोहमा सहभागी बन्ने मौका छ । पशुपालन तथा कृषि क्षेत्रबाट राम्रो लाभ मिल्नेछ । पढाइ लेखाइमा प्रगति हुनेछ ।
अवसर आए पनि नयाँ काममा हात हाल्नुअघि विचार पुर्याउनुहोला । काम बिग्रनाले मन खिन्न हुनेछ । रचनात्मक काम सुरु गर्ने समय छ । रमाइलो जमघटका बीच स्वादिष्ट भोजनको आनन्द पाइएला । पारिवारिक आत्मीयता बढ्नेछ । विभिन्न अवसर प्राप्त हुनेछन् ।
अप्ठ्यारा परिस्थितिसँग सम्झौता गर्नुपर्दा मन खिन्न रहनेछ । पेटको खराबीले स्वास्थ्य कमजोर रहला । दिगो फाइदा हुने काममा लगानी बढाउन सकिनेछ । पति पत्नीबीच घर सल्लाह भने नमिल्न सक्छ । काम बिग्रने डरले सताए पनि मेहनत गर्दा फाइदै हुनेछ ।
Prev१० वर्षका बालक पटेलको रहस्यमय निधन भएको ४ वर्ष पछि खुल्यो घटनाको अनौठो कारण, प्रहरी पनि चकित्
Next५० वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि उस्तै सुन्दर छिन् अबिवाहित नायिका निरुता, हेराैँ तस्बिर
आमिर खानकी छोरीमाथि शा रीरिक शो’षण भएको खुलाशा
बढ्यो अन्तराष्ट्रिय रुपमा ओलीको चर्चा, यी हुन् खुलेरै साथ् दिने शक्तिशालि देश !
‘महानायिका’ घोषित भइन करिश्मा (फोटो फिचर)
श्रीमानको कमजोरीले गर्दा बच्चा नजन्मिएर सहमतीमा आफ्नै बुवासँग श्रीमतीई पठाएपछि…!
फिल्म राजा हिन्दुस्तानी रिलीज भएको २४ बर्ष पछी थाहा भयो यस्तो पर्दा पछाडीको वास्तविक कुरा… (3182)
क्यामेरामा रेकर्ड नभएको भए कसैले पत्याउने थिएन यो घटना, जान्नका लागी भिडियो सहित पुरा हेर्नुहोस (2843)
प्रयोग भइसकेको क’ण्ड’म बटुलेर महिलाले गर्थिन यस्तो काम, प्रहरी पर्यो चकित् (1465)
लाइसेन्स निकाल्दै हुनुहुन्छ भने फेरी आयो नयाँ नियम (1053)
‘मेरो बुढीको गो’प्य अं’गको फोटो त्यो मान्छेको मोवाईलमा कसरी गयो’, भेटियो थुप्रै प्रमाण (भिडियो) (607)
सुतेका थिए उनि….. तर उठ्दा विश्वभर भाइरल भैसकेका थिए (तस्विर सहित) (448)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (409)
भाइरल हुनकै लागि यी युवतीले जे खाइन हेर्नुहोस (386)
प्रदेश ट्राफिक कार्यालय भरतपुरमा (371)
पूरा हेर्नुहोस मात्र9लाख 99 हजार मा घर बिक्रीमा (341)
बिवाह भएको २२ महिनासम्म श्रीमतीले एकपटकपनि सम्बन्ध राख्न नदिएपछि सुरेन्द्रले छोडे संसार
बिदेशबाट आएको ६ दिन नबित्दै श्रीमानले रोजे यस्तो बाटो (भिडियो)
गुल्मीमा बेपत्ता परेकी बुहारीको श वको टाउको मात्रै बोरामा राखी स्याउलाले ढाकेर राखेको फेला
घरनजिकै हिँड्दै गर्दा ३ करोड रुपैयाँको डल्लोमा ठे’स लाग्यो, छिमेकीले मूल्य भन्दा सातो गयो
भाडाको विमानको लास्ट सिटमा प्रधानमन्त्री ओलीको पोखरा यात्रा
© Copyright 2016–2021 Online Nepalaja. All rights reserved.